Sida farcankii baktiiriyada loo yaqaan "lotus lotus" mustaqbalku waa sidaas oo kale, oo qofka qaabkiisuna waa nooca binu aadamka oo ku qarsoon. Noocan waa in si aan qarsoodi lahayn loogu uuraystaa, ka dibna loo maro jidhkeeda bikradda ah ee ku dhashay. Mid kasta oo sidaas ku dhashay wuxuu noqonayaa Badbaadiyaha dunida oo ka badbaadiya jaahilnimada iyo dhimashada.
Waa hore ayaa loo yidhi, hadalku waa lumay: wuxuu noqday jidh. Kor u qaadista Badbaadiyuhu ereyga lumay ayaa laga heli doonaa.
MADAXWEYNAHA ma aysan horumarin karin duruufo adag oo galay adduunyo nidaamsan oo meel bannaan oo aan lahayn mabda 'naqshad ama Foom.
Iyadoo aan lahayn mabda 'qaab fudud oo shey fudud looma abuuri karo loona horumarin lahaa qaab la taaban karo. Iyadoo aan lahayn mabda'a foomka walxaha dhulka, dhirta, iyo xayawaanka, ma sii wadi karin sidan oo kale. Mabda 'aasaaska qaab dhismeedka walxaha dhulka, dhirta, iyo xayawaanka, waa kala fogeyn karaan oo waxay ku noqon doonaan dowladdii hore ee ay ka soo baxeen. Qaab dhismeedka ayaa loo waafajiyaa adeegsiga, waxayna horumar ku gaartaa boqortooyo ilaa boqortooyo iyadoo qaab ah. All xoog waa arrin, oo wax walbana waa xoog, xoog iyo arrinta in ay yihiin labada ka soo horjeeda ee isku walaxda on diyaarad kasta oo ficil. Ruuxa ku duulaya diyaaraddaha waaweyn waxaay wax ku noqdaan diyaaraddayada, arrinta duulimaadkaana waxay mar labaad noqotaa ruux. Mawduucyada aasaasiga ah ee fudud, ilaa adduunkeena iyo wixii ka dambeeya, ilaa fahamka ruuxiga ah, dhammaantood waxay ka kooban yihiin shey iyo ruux, ama “xoog” sida qaar ay door bidaan inay ugu yeeraan ruux — laakiin waxaa jira toddobo diyaaradood oo ficilladooda ah. Waxaan ku noolnahay jir ahaan, ugu hooseeya heerka jirdhiska, laakiin ma ahan ujeedada horumarka.
Foomku waa mabda'a muhiim u ah diyaarad kasta oo ficil iyo, mabda 'ahaan, foomku wuxuu ku shaqeeyaa mid kasta oo ka mid ah toddobada diyaaradood. Waxaa jira qaab qaab neefsasho ah, oo maskaxdu u isticmaasho samaynta bilowgeeda nolosha nolosha; qaab-nololeed, oo badda weyn ee noloshu u adeegsanayso inay ku wareejiso awoodeeda iyada oo loo marayo duniyo la muujiyey; foomamka astral, oo loo isticmaalo diiradda ama goob kulan oo loogu talagalay dhammaan xoogagga iyo qaababka kuwaas oo, sida dusha dheryasameeyaha, maskaxdu u shaqeyso; qaab jinniyeed, oo loo istcimaalo isu-dheellitir ama isu-dheellitir dheelitiran taas oo maskaxdu ku barato qarsoodiga sunta, ikhtiyaar-la'aanta, iyo midowga; foomamka rabitaanka, kaas oo u adeega si loo qeexo, loo muujiyo, loona kala sooco rabitaanada sida ku saleysan horumarkooda dabiiciga ah ee dunida xayawaanka; Qaababka fikirka, —often ay muujiyeen farshaxanleyda, rinjiyeyaasha, iyo farshaxannada kale — kuwaas oo muujiya astaamaha maskaxda, waxay muujinayaan ujeedooyinka aadanaha, waxayna u adeegaan sida hiddaha ama abuur taas oo qaab dhismeedka shakhsiyadda cusub loo dhisay; Qaab-shaqsiyeed, kaas oo ah dabeecadda ama is-huwan ee sii socota nolosha ilaa nolosha, oo wadarta guud ee horumarka. Marka foomka shaqsiga ahi uu dhammaystiro wareegiisa koritaanka waa dhimaneysaa qaab aan weligiis loo baahnayn oo u baahan mar dambe inuu baxo. Kahor intaanu dhammaysan, si kastaba ha noqotee, qaabkiisu waa isbeddelayaa. Waxaa jira qaabab fiican oo ka baxsan heerka weligood kor u kacaya, in kasta oo laga yaabo inaysan hadda faa’iido ahaan u lahayn ka fikiridda iyaga.
Jirka jidhka bini-aadamka wuxuu umuuqdaa mid joogto ah, laakiin waxaan ognahay in walxaha ay ka kooban tahay in si joogto ah loo tuurayo, iyo in walxaha kale loo isticmaalo in lagu beddelo unugyada qashinka. Maqaarka, hilibka, dhiigga, dufanka, lafaha, dhuuxa, iyo xoogga dareemayaasha, waa in loo beddelaa sidii loo isticmaalay, haddii kale jirku wuxuu lumiyaa. Cuntada loo isticmaalo ujeeddadan waxay ka kooban tahay waxaan cunno, cabno, neefno, urno, maqalno, aragno, iyo waxaan ka fikirno. Markii cuntada loo galiyo jidhka waxay u gudubtaa durdur dhiig, taas oo ah nolosha jidhka ee jidhka. Waxaas oo dhan waxaa laguqaban karaa qulqulka nolosha oo dhiigga lagu keydiyaa unugyada, ama meel kasta oo looga baahdo. Mid ka mid ah waxyaabaha yaabka leh ee ugu caansan geedi socodka jir ahaaneed waa, in ka dib markii la qiimeeyo cunnada ay ka kooban tahay, walxaha ay u dhisan yihiin unugyo, guud ahaan, loo habeeyey qaab dhismeedka xubnaha iyo unugyada jirka. Sidee ayey u suurta gal u tahay nolosha nool iyo koraysa inay sii ahaato ficil ahaan iyada oo aan loo beddelin qaabkeeda inta ay socoto nolosha oo dhan, mooyee in arrinta loo adeegsado dhismihiisa loo qaabeeyo oo loo haysto si waafaqsan qaabeynta qaab ahaan.
Sida qulqulka dhiiga ee jirkeenu u xafido waxkastoo wareegaya ayaa hadana qulqulka nolosha waxaa usocda qulqulka guud ee xajigiisa oo dhan xajisto si joogto ah. Waxay u yaraynaysaa wax muuqata oo loo arki karo waxayna mar kale ku milmaysaa waxa aan la arki karin iyadoo mid kasta oo ka mid ahi uu ka shaqeyn karo xagga hore iyo xagga sare ee dhammaystirka iyada oo loo marayo qaab.
Waxaan ku aragnaa qaabab aan la tirin karin oo hareeraheenna ah, laakiin waxaan inta badan weydiinnaa sida waxyaabaha walxaha agabku u qaataan qaababka aan ku aragno; haddii qaabka iyo arrinta guud ay isku mid yihiin; Qaabkee ama muxuu foomka la siinayaa ugu sii jirayaa isla noocyada kale?
Mawduuca guud iskuma noqon karo qaab, haddii kale si dhakhso ah iskama beddelayo; ama haddii la beddelo waxay u beddeleysaa qaab gaar ah. Foomku ma noqon karo arrinta guud ama waxa loo beddeli karaa sidii arrinta oo kale, laakiin waxaan aragnaa in jidh kasta uu ilaaliyo qaabkiisa, in kasta oo ay isbadal joogto ah u yeeshaan sheyga si loo ilaaliyo jirka qaab ahaan. Waxaan aragnaa arrin guud, oo waxaan aragnaa qaabka ay ku jirto. Haddii aan aragno arrinta guud, oo aan u aragno qaab ahaan, oo arrinta guud ahaan aysan ahayn qaab, ama qaabku uusan ahayn arrin guud, markaa ma aragno foomka marka laga reebo arrinta. Foomku, markaa, in kasta oo laftiisa aan la arki karin, wuxuu ku yimaadaa aragtida keliya iyadoo la kaashanayo arrinta, laakiin, isla mar ahaantaana, waxay awood u siineysaa arrinta inuu muuqdo, iyo muuqaal ahaan, inuu muujiyo horumarkiisa boqortooyooyinka hoose; in loogu adeego sidii garsoor loogu talagalay waxbarashada maskaxda; iyo sidaas oo ay ugu adeegto inay ka caawiso horumarkiisa iyada oo la xiriiray maskaxda.
Foomamka dabiiciga ah ee aan aragno waa kuwo ka sii badan ama ka yar oo dhabta ah oo ka hadlaya milicsiga astaan ​​ee qaababka fiican. Noloshu waxay u dhisantaa sida ku saleysan naqshadda qaabka astralka iyo waqtigaas ayaa qaabku u muuqdaa adduunkeena.
Foomamka waa fikradaha gilgishay. Cajal, libaax, ama adduunyo, mid walbaa wuxuu ku yimaadaa muuqaalka qaab ahaan, kaasoo ah fikirka la ruxay. Fikradaha noloshiisu waxay murugaysanayaan geerida ka dib waxayna keenaan abuur ka soo baxa, markii waqtiga ku habboon yimaado, loo qaabeeyo shakhsiyadda cusub.
Matter, jaantus, iyo midab, waa seddexda aasaaska u ah sameynta. Shaygu waa jirka qaabkiisu yahay, xaddid xuduudeeda iyo soohdintiisa, oo midabkeeda muujiya. Xaaladaha saxda ah ee qaabku waxay ka gudubtaa marinka nolosha, noloshana tartiib tartiib ayey isu dhisaa qaabkeeda wayna muuqataa.
Foomamku ma jiraan ujeedo loo leeyahay oo lagu garto loona maroorsado maskaxda, in kasta oo qaababku ay dabin u dhigaan oo u qalloociyaan maskaxda. Xaqiiqdi waa maskaxda lafteeda nafteeda nafteeda waxayna u ogolaataa in loo khiyaaneeyo qaab, oo maskaxdu waa inay ku sii socotaa jahwareer ilaa ay ka aragto qaababka iyo ujeedada qaababka.
Ujeedada foomku waa in loo adeego sida goob, shaybaar, ee loogu talo galay in sirdoonka ku dhex shaqeeya ay ka shaqeeyaan. In la bogaadiyo qaab ahaan qiimaheeda dhabta ah, iyo qaybta ay ka qaadanayso isbedelka mabda'a caqliga leh ee aan u hadlayno sida Maskaxda, waa inaan ogaano inay jiraan laba dariiq oo ah: Jidka Qaabka iyo Jidka Miisaanka. Kuwaani waa wadooyinka kaliya. Mid keliya ayaa la dooran karaa. Midkoodna ma safri karo labadoodaba. Dhammaantood waa inay doortaan waqtiga, midna ma diidi karo. Xulashada ayaa ah mid dabiici ah sida koritaanka. Waxaa lagu go'aamiyaa qofka ujeedadiisa guud ee nolosha. Jidkii la doortey, ayaa socdaalku caabudaa markuu safro. Jidka qaabku wuxuu u horseedaa kor iyo xagga sare, xagga sare ee xoogga iyo ammaanta, laakiin dhammaadku waa mugdiga baabi'inta, waayo dhammaan noocyadu waxay ku noqdaan maaddada isku-dhafan. Rabitaankii ugu horreeyay ee lahaansho ama qaab qaar, ilaa rabitaanka lahaansho ama qaab ahaan lagu nuugo; rabitaanka lahaanshaha jirka ee la taaban karo, ilaa cibaadada ugu habboon ee ilaah; Jidka dhamaadka foomamka waa isku mid dhammaan: baabi'inta shaqsiyadda. Foomka weyn wuxuu nuugaa kan yar, ahaadaa qaababka jir ahaaneed ama ruux ahaaneed, iyo cibaadadu waxay ku deg degtaa nidaamka. Foomamka la taaban karo ee lagu caabudo maanka aadanaha ayaa leh meel ay ku caabudaan qaabab fiican. Ilaahyada yar yar waxaa soo jiita ilaahyo waaweyn kuwaasna waa ilaah weyn, laakiin ilaahyada iyo ilaaha ilaahyadu waa inay, dhamaadka ugudambaysta, lagu xalliyo maado isku mid ah.
Rabitaan, himilo, iyo taajirnimo, hogaaminta adduunka iyo qaabdhismeedka adduunka. Qaab-dhismeedka adduunku waa fikradaha aan la soo koobi karin ee qaababka la taaban karo. Qaab dhismeedka bulshada, dawladda, kaniisadda, ayaa ah kuwa maskaxda si dhab ah u leh isla markaana leh qaababkooda ugu habboon sida xaqiiqada ah qaababka jira ee ay u dhisan yihiin daaqadaha, kateetarada, ama aadanaha.
Laakiin qaababka la taaban karo, iyo qaab dhismeedka bulshada, dawladda, iyo caqiidooyinka, maahan shar la doonayo in la baabi'iyo. Foomku waa mid qiimo leh, laakiin kaliya u dhigma heerka ay ka caawineyso fahamka fahamka. Kaliya sida ay u caawinayso horumarka garashada ayaa runtii ah mid qiimo leh.
Jidka miyirka wuxuu ku bilaabmaa jiritaanka miyirka ee miyirka. Waxay ku sii socotaa kuna fidisaa fahamkan, iyo xallinta dhammaan qaababka iyo fikirka sinu miyirka. Tani waxay kuu horseedaa qaddarin, taas oo ah barta dhexdeeda noocyada adduunka. Marka qofku si joogto ah u sii joogi karo, cabsi la'aan, iyo welwel la'aan xagga fikradda keli-talisnimada ah, waxaa jira qarsoodigan: barta keli-talisnimada ayaa sii fida oo noqota midnimada oo dhan.
Gelitaanka socodka nolosha adduunka, iyada oo ku duudduubnaa guud ahaan arrimaha iyo nadaafadda, ku qulqulaya dareenka isla markaana ku dhex gashay hilmaamta shucuurta, maskaxda ayaa ku wareegsan, xidhay, xidhay kuna xidhay maxbuus qaab ahaan. Dareenka, shucuurta, iyo qaababka, waa mawduucyada maanka - hal abuurahooda dhabta ah - laakiin ma awoodin inuu xukumo mawduucyadooda ay ka soo bexeen, khiyaameeyeen, oo ay si xor ah uga qaateen boqornimadooda. Qaab dhismeedka ayaa dareenka u koray una muuqdaan wax run ah, waxay been abuur ka sameeyeen maskaxda fiilooyinka aan la arki karin ee shucuurta ka xoog badan xadhkaha birta, laakiin sifiican ayaa loo qaabeeyey iyagoo u muuqda inay la mid yihiin dhammaan nolosha qaaliga ah, nolosha nafta lafteeda. .
Qaabka hadda waa Ilaah; wadaaddada sare waa dareenka iyo shucuurta; Maskaxda waa maadooda, in kasta oo wali abuuraha u yahay. Foomku waa Ilaaha ganacsiga, bulshada, iyo qarankaba; fanka, sayniska, suugaanta, iyo kaniisada.
Kumaa dafira in daacada Ilaah la sheegto? Ayaa wax garanaya oo xukuma oo doonaya, oo khiyaanayn kara ilaaha beenta ah, oo u adeegsan kara dhammaadka faaligga; fur furaha maxaabiista; sheegashada dhaxalkiisa rabbaani ah; oo bilow dariiqa u horseedaya Hal-qabsiga Midnimada Niyad-Jabinta.